China Mason Jar Vase orinasa sy mpamatsy | Tsara ery
Tsy misy na inona na inona intsony amin'ny fomba nentim-paharazana hametraka ny sakafonao ao amin'ny Mason Jar Mason 500ml! Nampiasaina nandritra ny taonjato mahery, ny siny mason manetry tena dia nitahiry karazan-tsakafo maro isan-karazany, anisan'izany ny fandroana, fitahiry, pickles, chutney, vinegars… ary maro hafa koa!
Ity siny masonolera vaovao ity dia ampiasaina rehefa manakaiky ny vazy iray.
1. afovoany vita tanana vita tanana!
2. Ny loko ivelan'ny siny dia hosodoko sy ory. Tsy natao hoso-doko ny atiny.
3. Mamoaka ny fahatsarana tanindrazana klasik amin'ny famolavolana kanto Mason zaridaina amin'ny fametrahana haingon-trano rehetra.
4. Ny voninkazo dia tsy tafiditra amin'ny vidin'ny tavoara.
5. Ny habeny sy ny fahafaha-miakatra hatrany amin'ny alàlan'ny fidiram-bolan'ny mpanjifa.
6. loko maro loko ho an'ny safidy hosodoko.
7. Ny volon-damba sy ny tady ahosotra ho an'ny haingo vazy.
8. Ampiasao amin'ny fanaovana fety / fanomezana an-trano / fanomezana, sns.
Momba ny orinasa ahy
Nanana orinasa matihanina izahay namokatra tavoahangy tsara indrindra any Chine!
Manome toky izahay fa handray ny fonosany soa aman-tsara ny mpanjifanay rehetra amin'ny kalitao tsara sy kalitao tsara.
Fandefasana haingana dia afaka mahazo mivalona arak'izay vantany vao vita ny fanamafisana ny baiko.
Previous: Sakafo tavoahangy divay vera vera
Manaraka: Mason Jar Mug miloko isan-karazany
Voaroaka miloko fitaratra vita amin'ny fo matevina
Ny lamba matevina mavesatra matevina matevina